Minyengetero yekubhabhatidzwa. ? Ndiri mukomana nemusikana naCorta [muchimiro chemuchinjikwa]
Minamato yekubhabhatidza Semukomana nemusikana, zvipfupi uye zvakanaka nhema mune chokwadi kuti rubhabhatidzo chiitiko chakachena chemweya uye kwatinoti kutenda kwakasimbiswa kuburikidza nemunamato.
Kunyangwe zera rekuti munhu abhabhatidzwe, kutenda chinhu chisina kana chekuita nezera asi nekufona kunonzwika kunobva pamoyo, munamato unoshandiswa kusimbisa kudana uku uye kuti ugokwanisa kutakurwa. kubva mumwoyo nekutenda uye kushinga.
Panyaya yekubhabhatidza kwevacheche vanoitwa sechiitiko chekutenda uko vabereki vari kusimbisa kubva vachiri vadiki rudo rwebasa raIshe.
1 Minamato yekubhabhatidza
2 1) Minamato yekushungurudzwa kwevasikana
3 2) Minamato yekubhabhatidza kwemwana
4 3) Minamato yekukoka christening
5 4) Pfupi christening munamato
6 5) Minamato yekubhabhatidzirwa kwemuchinjikwa
6.1 Ndeipi minamato yekubhabhatidzirwa?
6.2 Iyi mitongo ine simba here?
Chinhu chakakosha pane izvi zvese chinoitwa nekugutsikana uye neruzivo rwese. Minamato yekubhabhatidza inogona kuitwa nevabereki, godogogo kana chero imwe nhengo yemhuri kana shamwari inogara neyavo yekuzviita.
1) Minamato yekushungurudzwa kwevasikana
Vanodiwa Baba Vekudenga, tinouya pamberi penyu nhasi kuzopa hupenyu hwa (zita remusikana).
Mukutenda kune chipo chehupenyu hwake mumhuri medu, uye mukuziva kwesimba renyu guru uye huchenjeri, isu tinokumbira chikomborero chenyu pahupenyu hwake nhasi.
Dai ari musikana ane hutano, akasimba uye akangwara; Dai akura nehungwaru hwako uye nehungwaru hwako kusvika azova mukadzi saMariya amai vaJesu.
Dai mwanasikana wedu akasarudzwa newe kuzadzisa zvinangwa zvako pano Pasi. Izvozviisa pasi pekuda kwako, uyo anoziva nzira yekukurumbidza, kukushandira uye kukuda.
Ipapo anowana kufarirwa kwako mazuva ese ehupenyu, kuti anogashira kurumbidzwa kwako, nekukudzwa uye nekuwanda.
Vasikana vane chikamu icho chakapfava uye chisina kusimba chinovaita vakasiyana uye ndosaka minamato yekubhabhatidza iripo chaiyo yavo. Zvinetso zvinotanga kuiswa nehupenyu vachiri vadiki zvinogona kuve zvakasimba uye kana kuita sarudzo yekuvabhabhatidza uye ivo pachavo pavanenge vachidzidza minamato yavo isu tiri kuvasiya mavari zvishandiso zvine simba zvavanogona kushandisa mune ramangwana.
2) Minamato yekubhabhatidza kwemwana
Mambo weMadzimambo naShe wemaIshe, pano pamberi pehumambo hwenyu hune mbiri kuti mupe pamberi penyu hupenyu hwomwanakomana wedu (zita remwana).
Ndatenda Mwari zvikuru nekutiona isu takafanira kuve vabereki vemwana akanaka uyu. Isu tinovimbisa kukuchengeta, kukuda uye kukutungamira munzira yakanaka yehupenyu. Asi isu tinouyawo nhasi kuzotsvaga chikomborero chako kwehupenyu hwako hwese.
Ngaave "Shamwari yaMwari" sezvakaitwa muranda wenyu Mozisi. Dai iwe uchakurumidza kuziva chinangwa chako muhupenyu, dai iwe usinga zviise pasi pehurongwa hwepasi asi ita kuda kwako kuti ubudirire zvizere. Ngaave munyoro kuti agamuchire dzidziso dzako uye nehungwaru kuti abvume kuti imi Mwari ndimi zvese. Izvo zvinonzwisiswa muzvinyorwa nemitemo, hunyanzvi mumashoko, mukuru anofarira nyika uye mutungamiri.
Isu tinomukomborera nekukudzwa kweZita renyu iro riri pamusoro peZita rose.
Vana zvakare vane yavo chaiyo yekunamatira nekuti nguva zhinji nzira yavo mukati mekukura, ivo vanogona kukanganiswa nezvimwe zvinoverengeka ndosaka munamato wekubhabhatidza unokosha kuvana uchiita chiitiko cherudo, kutenda uye kuendesa Izwi raIshe rinotaura kwatiri nezve izvo zvekuraira mwana uye nzira dzaIshe kubva achiri mudiki, ndosaka kubva kukereke rudo uye kuburitsa hupenyu hwekunamata huzere nezvenhanho dzehukama naMwari Baba uye Vatsvene vako vese
3) Minamato yekukoka christening
Tenda Mwari nekundipa hupenyu.
Kutenda kuvabereki vangu nekundiratidza nzira.
Kutenda kune Mhuri yangu nekundipa rudo rwavo.
Kutenda kune vanonditsigira nekugadzirisa kwavo kurapa.
Ini ndinokukoka kubhabhatidzo rangu nomusi weSvondo Chivabvu 22 nenguva dza 1:00 pm mutembere yeMukadzi wedu wevarombo. Ipapo ini ndakamirira iwe kuti udye mumba yekutandarira iri pane Plan Street muSan Luis 117. Ndatenda.
Izvo zvakakosha kuti uve nekuvapo kwemhuri yedu uye shamwari. Naizvozvo, isu tinofanira kuve nemunamato wekukukoka iwe unofara.
Ndozvinoita munamato uyu wekukoka vanhu Kristu. Unogona kuishandisa wakasununguka pakukoka kwako kwekubhabhatidza.
4) Pfupi christening munamato
Kunoshamisa Mwari, kubwinya nekukudzwa ngakuve kwauri, musiki wega wehupenyu.
Isu tiri pano pamberi pechako kuvonga hupenyu hwa (zita remwana/ Nine, uyu akanaka mwana wamakatipa isu kuti uve mwanakomana.
Tinokuropafadza kuti kubva nhasi, utange hupenyu hwako nehungwaru uye chengetedzwa. Dai mwanakomana wedu akura achiziva kuti mweya wako Mutsvene ishamwari yake yepamoyo. Hupenyu hwake ngauve nezvinangwa zvisingagumi sezvakaita hupenyu hwaAbhurahama. uye kuti saiye, shivirira kumirira kuzadzikiswa kwezvipikirwa zvaMwari, anotenda mumashoko ako nedzidziso uye nokudaro moyo wako ngaufadze Mwari wedu.
Iva mwanakomana wedu akaropafadzwa, akagwinya, akasimba uye akabudirira mwanakomana kune mbiri yaMwari.
Minamato ine simba kunyangwe ikareba sei kana ipfupi, chii chinonyanya kukosha nekutenda kwavakagadzirwa .. MuBhaibheri mune mienzaniso yakawanda yatinogona kuwana mairi tinotaura pamusoro pemitsara pfupi yakapindurwa munguva pfupi uye Izvi ndizvo zvatinofanira kufunga nezvazvo. Kune minamato mirefu isingatendi uye neminamato mipfupi ine simba, zvese zvinoenderana nokutenda kwauinako kwete iyo nguva yaanogara.
5) Minamato yekubhabhatidzirwa kwemuchinjikwa
Minamato yekubhapatidzwa kwemuchinjikwa
Kana iwe uchida kuwana mimwe minamato yerubhabhatidzo yakagadzirira kupurinda, isu tinayo kumusoro kumusoro muchimiro chemuchinjiro. Ndicho chinhu chakanakisa chatakawana. Tora mukana wakazara!
Ndeipi minamato yekubhabhatidzirwa?
Minamato inotibatsira kuchenesa mweya nemweya wedu Inovandudzwa kuburikidza nemaitiro ese ekunamata nekuti iko kutora nguva nekuzvitsaurira mukufumisa mweya. Kubva panguva yatinogadzirira kunyengetera, zvinotanga kutora simba matiri, nekuti kupa nguva yedu mukuteerera Mwari kuri nani kupfuura chero chibayiro chero chipi chatingaite. Panyaya yerubhabhatidzo zvakatonyanya kudaro nekuti kuzvipira kwemweya kuri kuitwa pamberi paMwari.
Minamato yekubhabhatidza inoshanda kugadzirira mweya yedu kuti chiitiko chiitwe. Kana rubhabhatidzo rwuri muvana saka kuburikidza neminamato iyi tinogonawo kukumbira ramangwana, kuti Mwari vagare vachitungamira matanho avo uye vanoachengeta vari padyo nekwavo nguva dzese.
Iyi mitongo ine simba here?
Minyengetero yose Yakagadzirwa nekutenda ine simba rakanyanya uye ndizvo chaizvo chikonzero ivo vava chombo chemweya chatinogona kushandisa nguva dzose kwese kwatinenge tiri uye zvisinei nekunetsa kwatinokumbira.
Minamato inogona kukonzera kunyange vakafa kumuka kumakuva avo sezvatinoona mushoko re Mwari mune muenzaniso waRazaro kuti anga atova nemazuva akati afa uye neshoko rimwe chete riya rakamuka.
Mwari, Chinangwa, Santos